Amin'ireto fanambarana ireto dia nanolotra ny iPad Pro | Vaovao IPhone
Amin'ireto fanambarana ireto dia nanolotra ny iPad Pro vaovao i Apple
Nandritra ny ora vitsivitsy dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny laharana iPad Pro vaovao ry zalahy avy any Cupertino, faritra vaovao iPad Pro izay tsy nampoizina raha tsy tamin'ny faran'ny Oktobra tamin'ity taona ity. Ireo iPad Pro vaovao ireo dia misy ao amin'ny mitovy habe amin'ny taranaka fahatelo, 11 sy 12,9 santimetatra.
Ity karazana iPad Pro vaovao ity dia avy am-pelatanan'ny keyboard vaovao, keyboard marani-tsaina misy built-in, araka ny tsiliantsofina maro, ny trackpad iray ankoatra ny fanomezana samy hafa rafitra clamping izay natolony anay hatrizay, ny iPad dia tsy miraikitra amin'ny fitendry intsony.
Mba hanambarana an'ity faritra vaovao ity dia nandefa horonan-tsary vaovao roa tao amin'ny fantsona YouTube azy i Apple. Ny voalohany amin'izy ireo, mitondra ny lohateny hoe: Ny solosainanao manaraka dia tsy solosaina, mampiseho amintsika ny zava-baovao mahafinaritra indrindra natolotry ny iPad Pro 2020.
Ho fanampin'ilay processeur vaovao, A12Z Bionic, zava-baovao iray hafa hita ao amin'ny modely fakan-tsary any aoriana, mody misy fakan-tsary telo, toy ny fakan-tsary iPhone 11 Pro ary koa mampiditra sensor LIDAR, hanitarana ny fahaizan'ny fitaovana ho an'ny augmented zava-misy.
Ny titre faharoa, mitondra ny lohateny hoe: Fomba fampiasana solosaina tsara, Apple dia mampiseho amintsika ny safidy rehetra apetraky ny iPad Pro amin'ny ankapobeny, na ny maodely vaovao na ny taloha, na aiza na aiza misy antsika.
Tsy toy ny taloha, ny laharana iPad Pro vaovao dia manomboka amin'ny 128 GB, ho an'ny 64 GB tamin'ny taranaka teo aloha. Raha 128 GB ny toerana kely dia afaka misafidy ireo maodely 256, 512 na 1 TB isika.
Ny Magic Keyboard vaovao tsy ho hita raha tsy amin'ny Mey ary amin'izao fotoana izao dia ny dolara ihany no fantatsika: 299 ho an'ny maodely 11-inch ary 349 $ ho an'ny maodely 12,9-inch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Amin'ireto fanambarana ireto dia nanolotra ny iPad Pro vaovao i Apple
Logitech dia mandefa ny tranga tonga lafatra miaraka amin'ny trackpad ho an'ny iPad (2019) sy iPad Air
Ny iPhone misy 5G dia tsy ho tonga raha tsy amin'ny 2021 noho ny fiantraikan'ny coronavirus